မင်းသားကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပီ…..မင်းသားရဲ့ မန့်ကြောင့် အစည်းရုံးလည် – OK Media
February 25, 2022 Ok MediaLeaveaComment on မင်းသားကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပီ…..မင်းသားရဲ့ မန့်ကြောင့် အစည်းရုံးလည်
မင်းသားကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပီ…..မင်းသားရဲ့ မန့်ကြောင့် အစည်းရုံးလည်း တော်တော်အထိနာသွားပုံပဲ…….
မင်းမော်ကွန်းရဲ့ မန့်ကြောင့် ပွဲစည်နေခဲ့တယ့် ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး ပို့စ်
ယနေ့မှာတော့ အကယ်ဒမီ မင်းသားချော မင်းမော်ကွန်းရဲ့ ကွန်းမန့်တစ်ခုဟာ အရမ်းကိုဟော့နေပီး ပြည်သူများကလည်း မင်းသားရဲ့ ကွန်းမန့်ကို ဝိုင်းဝန်း အားပေးထောက်ခံနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်၊၊မင်းသားအနေနဲ့ နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ အရာရာကိုစွန့်လွှတ်ပြီး ပြည်သူနဲ့တစ်သားတည်းရပ်တည်ခဲ့သူဆိုတာလည်း အားလုံးလည်းသိပြီးသားပါ၊
မနေ့က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာရေးသားလာတယ့် သက်တမ်းလွန်သူများ လာရောက်သက်တမ်း တိုးကြပါရန်လေးစားစွာ အသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည် ဆိုသည့် ပို့စ်အောက်မှာ မင်းသားက ယခုလို သွားရောက်မန့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်၊
ထွက်ထားတယ်ဗျာ တစ်သက်လုံးစာအတွက် ခင်ဗျားတို့အစားရှက်လို့လေ၂၀၂၁ ဖေဖော်ဝါရီတစ်လလုံး သပိတ်စခန်းဖြစ်ခဲ့တယ့် ရုပ်ရှင်အစည်းရုံးရဲ့အပြောင်းအလဲမြန်မှုအတွက် ကိုရွံလို့ဆိုပြီး ခပ်ပြတ်ပြတ် ပြောထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်၊
ပရိတ်သတ်ကြီးတို့ရဲ့ အမြင်ကိုလည်း မန့်မှာ ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးကြပါအုံးနော်၊
မင္းသားကေတာ့ လုပ္ခ်လိုက္ျပန္ပီ…..မင္းသားရဲ့ မန႔္ေၾကာင့္ အစည္း႐ုံးလည္း ေတာ္ေတာ္အထိနာသြားပုံပဲ…….
မင္းေမာ္ကြန္းရဲ့ မန႔္ေၾကာင့္ ပြဲစည္ေနခဲ့တယ့္ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံး ပို႔စ္
ယေန႔မွာေတာ့ အကယ္ဒမီ မင္းသားေခ်ာ မင္းေမာ္ကြန္းရဲ့ ကြန္းမန႔္တစ္ခုဟာ အရမ္းကိုေဟာ့ေနပီး ျပည္သူမ်ားကလည္း မင္းသားရဲ့ ကြန္းမန႔္ကို ဝိုင္းဝန္း အားေပးေထာက္ခံေနၾကတာလည္းျဖစ္ပါတယ္၊၊မင္းသားအေနနဲ႔ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးမွာ အရာရာကိုစြန႔္လႊတ္ၿပီး ျပည္သူနဲ႔တစ္သားတည္းရပ္တည္ခဲ့သူဆိုတာလည္း အားလုံးလည္းသိၿပီးသားပါ၊၊
မေန႔က ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံး ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာမွာေရးသားလာတယ့္ သက္တမ္းလြန္သူမ်ား လာေရာက္သက္တမ္း တိုးၾကပါရန္ေလးစားစြာ အသိေပးႏွိုးေဆာ္အပ္ပါသည္ ဆိုသည့္ ပို႔စ္ေအာက္မွာ မင္းသားက ယခုလို သြားေရာက္မန႔္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္၊
ထြက္ထားတယ္ဗ်ာ တစ္သက္လုံးစာအတြက္ ခင္ဗ်ားတို႔အစားရွက္လို႔ေလ၂၀၂၁ ေဖေဖာ္ဝါရီတစ္လလုံး သပိတ္စခန္းျဖစ္ခဲ့တယ့္ ႐ုပ္ရွင္အစည္း႐ုံးရဲ့အေျပာင္းအလဲျမန္မႈအတြက္ ကိုရြံလို႔ဆိုၿပီး ခပ္ျပတ္ျပတ္ ေျပာထားခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္၊၊
ပရိတ္သတ္ႀကီးတို႔ရဲ့ အျမင္ကိုလည္း မန႔္မွာ ပါဝင္ေဆြးေႏြးေပးၾကပါအုံးေနာ္၊၊
ရုရှားသည် နေတိုးမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေအား ကျူးကျော်တော့မည် (ရုပ်သံ)